Enwere m ike Naghachi faịlụ site Maxell Flash Drive?
M nwere 1GB Maxell USB flash mbanye na m zuzuru wepụrụ site na kọmputa m na-enweghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ọrụ. Dị ka a n'ihi m nwere ike agaghịkwa ịnweta faịlụ na ya. Ugbu a mgbe m ikwunye ya azụ n'ime kọmputa m m gwara m mkpa reformat osisi iji na-eji ya - nke m iche na faịlụ niile ugbu a echekwara na ọ ga-kpochapụrụ. Bụ n'ebe ọ bụla ngwọta na m nwere ike weghachite ndị a faịlụ? Ekele.
Naghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị Maxell flash mbanye, ihe mbụ ị chọrọ ịnọgide na n'uche bụ ịkwụsị iji ya ọzọ. N'ihi ọhụrụ data na gị Maxell flash mbanye nwere ike mfe na-edochi ndị furu efu faịlụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ a Maxell flash mbanye data mgbake omume na-enyere gị aka.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac pụrụ ịbụ nnọọ ezi nhọrọ n'ihi na ị na-agbake data si Maxell flash mbanye ma ọ bụ na ebe nchekwa mkpisi. Ọ na-enyere gị naghachi faịlụ dị ka photos, akwụkwọ, videos, ọdịyo faịlụ, wdg si gị Maxell flash mbanye na ala, n'agbanyeghị na ha na-efu n'ihi nhichapụ, formatting, nrụrụ aka, virus agha ma ọ bụ ọbụna na-ezighị ezi na ime ihe.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute a omume iji weghachite data si Maxell flash mbanye ugbu a!
Igosi Maxell Flash Drive Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ka rụchaa mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Maxell flash mbanye data mgbake
Atọ mgbake ụdịdị ga-nyere gị mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume. Ha na-"Echefuola File Iweghachite", "nkebi Iweghachite" na "Raw File Iweghachite".
Naghachi furu efu faịlụ site na gị Maxell flash mbanye, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Cheta na: Jide n'aka na gị Maxell flash mbanye nwere ike ghọtara dị ka a mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Maxell flash mbanye
Ugbu a niile partitions na kọmputa gị ga-edepụtara ke usoro si window. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Maxell flash mbanye na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Naghachi data si a formatted Maxell flash mbanye, mkpa ka ị họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke ala nke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Maxell flash mbanye
Mgbe scanning, hụrụ data na gị Maxell flash mbanye ga-egosipụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "ụzọ" edemede. Ị nwere ike ele faịlụ aha ma ọ bụ preview hụrụ foto ego otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike agbapụtawo.
Mgbe ahụ akara faịlụ na ị chọrọ na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-Natara faịlụ azụ gị Maxell flash mbanye.